Ahoana no fomba nitondran’ny olona afo fahiny? | Fantatrao Ve?
Ahoana no fomba nitondran’ny olona afo fahiny?
NIOMANA hanao dia lavitra i Abrahama mba hanao sorona. Milaza ny Genesisy 22:6 fa ‘nalainy ny kitay ho an’ny fanatitra dorana ka nasainy nentin’i Isaka zanany.’ Izy kosa nitondra “ny afo sy ny antsin-kena.” Niainga izy mianaka avy eo.
Tsy resahin’ny Baiboly hoe ahoana no nataon’ny olona fahiny rehefa nampirehitra afo. Tena lavitra ilay dia nataon’i Abrahama sy Isaka. Mpanao fikarohana iray, fara fahakeliny, no milaza fa tsy ho vitan’izy ireo ny “hihazona afo hirehitra foana” mandra-pahatongany tany amin’izay nalehany. Mety ho fitaovana nahafahana nampirehitra afo àry no nentin-dry zareo, fa tsy afo efa nirehitra tsara.
Misy milaza anefa hoe raharaha be ny nampirehitra afo tamin’izany. Naleon’ny olona naka vainafo tany amin’ny mpifanila trano taminy, raha azony natao, toy izay hampirehitra afo. Maromaro àry ny manam-pahaizana mieritreritra hoe mety ho nitondra vainafo avy tamin’ny afo nampiasainy ny alin’iny i Abrahama, tamin’io fotoana io. (Isaia 30:14) Angamba vilany tany boribory kely nihantona tamin’ny rojo vy no nitondrany azy. Mety ho vainafon’arintany na vainafon-tsaribao ilay izy. Raha nitondra vainafo hoatr’izany ny olona nanao dia lavitra, dia afaka nandrehitra afo isaky ny nila an’izany. Nasiana kitay maina tsara fotsiny ilay izy, dia nirehitra.
Fantatrao Ve?—Janoary 2017
mailto:?body=Fantatrao Ve?—Janoary 2017%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2017244%26wtlocale%3DMG%26srcid=share⊂ject=Fantatrao Ve?—Janoary 2017
Fantatrao Ve?—Ny Tilikambo Fiambenana No. 4 2016
Fantatrao Ve?—No.1 2016